Astaamaha cusub ee mustaqbalka iPad Air 5, iPad Mini 6 iyo iPad 9 waa la sifeeyaa | Wararka IPhone
Astaamaha cusub ee loo daadiyay Mustaqbalka iPad Air 5, iPad Mini 6, iyo iPad 9
Angel Gonzalez | 29/07/2021 16:00 | iPad, Noticias
Wareegyada bandhigga ee ay Apple soo martay taariikhdeeda oo dhan ayaa sannadihii la soo dhaafay saameyn ku yeelatay. Ilaa aan sii fogayn, Sebtember waxay ahayd bishii iPhone halka Oktoobar ay ahayd bishii iPad. Iyadoo aan loo eegin bisha la soo bandhigayo, waxa iska cad ayaa ah taas Apple waxay ka shaqeyneysaa cusbooneysiinta dhammaan noocyadeeda iPad-ka kuwaas oo ay ka mid yihiin iPad Air 5, iPad Mini 6, iyo iPad 9th jiil. Xaqiiqdii, iibiye Shiineys ah ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah astaamaha uu mid kasta oo aaladahaan ugu dambeyn ku dari karo.
Tani waxay noqon kartaa iPad Air 5 cusub, iPad Mini 6 iyo iPad 9
Macluumaadku wuxuu ka yimid warbaahin caan ah oo caan ah oo Japanese ah, MacOtakara, kaas oo ay ka heleen xadi weyn oo ka yimid shirkad shiineys ah oo wax u og dunida casriga. Thanks to daadinta waxaan xaqiijin karnaa, oo ay weheliyaan warar kale oo hore, in Apple waxay ka shaqeyneysaa cusbooneysiinta iPad Air, iPad Mini iyo iPad jiilalka soo socda ee ay ka soo kala jeedaan.
Jiilka soo socda ee iPad Mini wuxuu soo bandhigi doonaa muuqaalka mini-LED
Sida ku cad macluumaadka la bixiyay, iPad Air 5 Waxay soo bandhigi doontaa naqshad la mid ah jiilka saddexaad ee 11-inch iPad Pro. Taasi waa, waxaan horey u geli karnay 11 inji oo lagu daray soo bandhig nidaamka kamaradaha laba geesoodka ah: xagal ballaadhan iyo xagal ballaadhan oo ballaadhan. Marka laga hadlayo jajabka ay ku dari doonto, waxay noqon doontaa - A15 Bionic chip, walaalkiis A15 oo qaadi doona iPhone 13. Chip wuxuu la jaan qaadayaa 5G mmWave. Ugu dambeyntii, iPad Air 5 waa lagu dari karaa afar hadla.
Xanta ayaa isaga sii socota 9aad jiilka iPad, nooca aasaasiga ah ee kiniiniyada ee ay Apple ka ganacsato. Ma jiraan sheeko cusub oo lagu soo dhex daray qalabkan dhowr sano. Apple waxay u badan tahay inay rabto naqshadda hayso ilaa 2022 ama ka badan, iyo in hadafku yahay in la helo ipad raqiis ah oo awood badan.
Ugu dambeyn, Jiilka 6aad ee iPad Mini Waxay yeelan doontaa shaashad 8,4-inji ah, oo leh A14 Bionic chip, taas oo ah waxa hadda ay qaaddo iPad Air. Heerka naqshadeynta, wax la mid ah ayaa ku dhaca sidii iPad-kii asalka ahaa, wax isbedel ah ma jiri doonaan ilaa 2022 kadib.
Waxa kale oo jira suurtagalnimada in mid ka mid ah iPad-yada laga wada hadlay ilaa hadda lagu daro a Qalabka LiDAR. Si kastaba ha noqotee, way diidaan suurtagalnimadaas, iyagoo ku andacoonaya in Apple kaliya ay ku soo bandhigeyso alaabadaas oo qayb ka ah 'Pro', labadaba iPhones iyo iPad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Astaamaha cusub ee loo daadiyay Mustaqbalka iPad Air 5, iPad Mini 6, iyo iPad 9
Beta cusub ee iPadOS 15 wuxuu isku daraa isla naqshadda Safari ee macOS Monterey